Faa'iidadayada - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Maxay tahay in lala shaqeeyo PCBFuture
Ma waxaad raadineysaa khubaro kaa caawin doonta inaad soo uruuriso noocyada tayada sare leh ee PCB-ga iyo mugga hooseeya ee ku socda waqtiga iyo qiimaha tartanka?
Muddo tobanaan sano ah oo waayo-aragnimo ah oo ku saabsan warshadaha elektarooniga ah, PCBFuture waxay halkan u joogtaa inay bixiso dhammaadka-ilaa-dhamaadka hal adeeg oo PCB Assembly ah oo loogu talagalay naqshadayaasha iyo ganacsiyada.
Haddii aad tahay naqshadeeye elektaroonig ah oo raadinaya nooc gaar ah oo ku saabsan isku-xirka PCB ama ganacsi injineernimo oo raadinaya in la isu geeyo looxyo daabacan oo dhexdhexaad-yar-dhexdhexaad ah, waxaan jeclaan lahayn inaan ku siino alaab tayo sare leh iyo adeeg aad u fiican.
1. Adeegyada wax soo saarka PCB tayo sare leh
PCB waa aasaaska alaabta elektarooniga ah. PCBFuture waxay ka bilowdaa ganacsi daabacaadda guddiga wareegga wareegga, hadda waxaan nahay mid ka mid ah shirkadaha wax soosaarka guddiga wax soo saarka guddiga daabacan ee adduunka daabacan. Waxaan ka gudubnay shahaadada badbaadada UL, IS09001: 2008 nooca shahaadada nidaamka tayada, IS0 / TS16949: nooca 2009 ee shahaada alaabada baabuurta, iyo shahaadada sheyga CQC.
2. Adeegga PCB ee Turnkey
Iyadoo in ka badan toban sano oo waayo aragnimo ah oo ku saabsan horumarka, been abuur, ururinta iyo tijaabinta PCBs caadadii, waxaan hadda awood u siineynaa inaan siino adeegyo badan oo kala duwan, laga soo bilaabo isku imaatinka PCB, isku imaatinka mugga PCB, noocyo kala duwan oo looxyada ka sameysan oo been abuur ah, adeegyo soo saaraya qaybaha. Adeegyadeena PCkey-ga ee loo yaqaan 'turnkey PCB' ayaa ku siin kara hal meel oo dukaan joogsi ah kaas oo kaa caawin kara inaad keydiso lacagta, waqtiga iyo dhibaatooyinka. Dhammaan adeegyadeennu waa kuwo la hubo oo tayo leh iyo qiimo jaban.
3. Golaha PCB noocooda xirfadeed iyo adeegga leexashada PCB si dhakhso ah
Golaha PCB noocooda ah iyo isku duwidda dhaqsaha badan PCB had iyo jeer waxay dhibaato ku ahayd naqshadeeyayaasha iyo shirkadaha elektiroonigga ah oo badan. PCBFuture waxay ka heli kartaa tusmadaada kulanka PCB-gaaga qiimo tartan leh waqtiyo soo noqosho dhakhso leh. Taas oo kaa caawin doonta inaad alaabadaada elektaroonigga ah suuqa si dhakhso leh u geliso qiimo jaban. Waxaan leenahay koox xirfadle ah oo jilicsan oo isku dhafan oo PCB ah si ay ula tacaalaan dhinac kasta oo geeddi-socodka ah oo ay ku jiraan soo saaridda guddiyada wareegga, soo iibinta qaybaha, isku-dhafka elektarooniga ah iyo tayada. Marka macaamiisheennu waxay diiradda saari karaan naqshadeynta iyo adeegyada macaamiisha.
4. Waqtiga hogaaminta ee gaagaaban iyo qiimaha ka hooseeya
Dhaqan ahaan, macaamiisha waxay u baahan yihiin inay helaan oraahyo isla markaana la barbardhigo soosaarayaasha PCB-yada kala duwan, qeybiyeyaasha qaybaha iyo isku-urursadayaasha PCB. La kulanka lammaanayaasha kala duwan waxay kugu qaadanaysaa waqti badan iyo tamar, gaar ahaan qaybaha kaladuwan oo ay adag tahay in la helo. PCBFuture waxay ka go'an tahay inay kaa caawiso inaad xalliso dhibaatooyinka iyadoo la siinayo adeeg hal-joogsi ah oo PCB-ga lagu kalsoonaan karo, waxaan ku siin karnaa nooc ku-habboon iyo mugga adeegga isku-imaatinka PCB. Dhex dhexaadinta iyo fududeynta shaqada, soosaarida habsami leh iyo isgaarsiinta oo yar ayaa ka caawin doonta in la gaabiyo waqtiga hogaanka.
Miyay tahay in adeega PCB-ga ee buuxa uu kordhin doono kharashka? Jawaabtu waa Maya PCBFuture. Maaddaama qaddarkayaga iibsigu ka kooban yahay uu aad uga ballaaran yahay, waxaan inta badan ka heli karnaa qiimo dhimis ka wanaagsan adduunka si wanaagsan u ogaano soosaarayaasha ama qeybiyeyaasha. Intaa waxaa dheer, nidaamyadeena shaqada ee tuubbada loogu talagalay amarada PCB-ga ee waxtarka leh waxay si hufan u meel marin karaan ka shaqeynta tiro badan oo ah RFQs iyo amarro. Kharashka ka baaraandegidda ee loogu talagalay mashruuc kasta oo PCB-ga loo yaqaan 'turnkey' wuu yaraanayaa, oo qiimaheennu wuu ka hooseeyaa isla isla heerka hubinta tayada.
5. Adeeg aad u qiimo badan
> Looma baahna tirada amar min, 1 gabal waa la soo dhaweynayaa
> 24 saac taageero farsamo
> 2 saacadood adeegga xigashada PCB adeegga
> Adeegyo la hubo oo tayo leh
> Hubinta DFM ee bilaashka ah ee injineerada xirfadleyda ah
> 99% + heerka qanacsanaanta macaamiisha